Nahoana i Donald Trump no malaza be ao Nizerià? · Global Voices teny Malagasy
Manana mpankafy marobe ao Nizerià i Trump
Voadika ny 12 Janoary 2020 6:38 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Español, Português, македонски, عربي, українська, Ελληνικά, Yorùbá, Français, русский, Italiano, 日本語, English
Ny filoha Donald Trump niverina ho ao amin'ny Trano Fotsy ao Washington tamin'ny 19 Aogositra 2018. Sary an'i Samira Bouaou/The Epoch Times, CC BY 2.0.
Somary nahazo fanamarihana ratsy avy amin'izao tontolo izao ny filohan'i Etazonia, Donald Trump, amin'ny fomba fandraisany an-tànana ny raharaha iraisampirenena — saingy tsy any amin'ireo firenena afrikàna sasany toa an'i Nizerià izany.
Araka ny fanadihadiana iray vao haingana nataon'ny Pew Research Centre, ny ankamaroan'ireo Nizeriàna dia “matoky” fa “hanao ny mety amin'ny raharaha erantany” i Trump.
Avy aminà fanadihadiana natao tamin'ny finday sy resaka mivantana no nanangonana ireo vokatra azon'ilay fanadihadian'ny Pew, antsafa natao teo ambany fitarihan'ny Gallup — orinasa iray mpanolotsaina sy mpanao fanadihadiana manana ny foibeny any Washington DC.
Ny fanadihadiana iray tamin'ny Oktôbra 2019 nataon'ny Tweepsmap momba ny fitambaran'ny isan'ireo mpanjohy an'i Trump ao amin'ny Twitter dia mampiseho fa ao anatin'ny laharana dimy voalohany erantany ry zareo Nizeriàna:
Raha tsy hoe te-hiaina ao anatin'ny tsy fanekena angaha isika, faran'izay tena malaza be ao Nizerià i Trump. Fanamarihana, tsy mpankafy azy aho saingy ilaina lazaina ny marina, tena manana mpankafy eny ifotony lery aty.
Na izany aza, tsy manazava ny antony mahatonga ireo Nizeriàna sasany hiankohoka amin'i Trump io.
Adaobi Tricia Nwaubani, Nizeriàna mpanoratra, no nanazava tamin'ny The World, fandaharana mivantana ho an'ny daholobe iarahana mamokatra amin'ny BBC, fa ilay “endrika bandy henjana” ananan'i Trump no manohina ny fo ao amin'ity firenena iray be mponina indrindra ao Afrika ity:
Mitolagaga amin'ny sariny toy ny bandy henjana ny olona, ary mampiala voly ilay fombany mivantambantana fiteny. Mahagaga izy ho an'ireo Amerikàna. Hafahafa. Hafa noho izay efa azonareo. Saingy efa mahazatra anay ny mahita mpitondra miresaka tsy mahafehy vava, manevateva sy maniratsira fiteny rehefa izay no mahafaly an-dry zareo. Ary araka izany, ho anay lery dia tsy hafahafa toy izay mety ho fahitan'ireo Amerikàna azy.
Ny finoana no antony iray hafa. Tia an'i Trump ireo Nizeriàna kristiàna.
Cheta Nwanze, lehiben'ny fikarohana ao amin'ny SBM Intelligence nilaza tamin'ny Global Voices hoe:
Tena mba tiako ny hahafantatra hoe TAIZA tao Nizerià no nanaovana io fanadihadiana io. Vonona aho ny hanao fanamby hoe ny tapany atsimon'i Nizerià no betsaka tamin'izany, izay manazava ny fitiavana an'i Trump. Betsaka amin'ireo olony eny ifotony no kristiàna evanjelika, ka avy amin'ireny ireo Nizeriàna marobe no maka ny aingampanahiny.
Manana antokom-pinoana roa lehibe i Nizerià, miaraka aminà vahoaka vinavinaina ho 200 tapitrisa eo: ny finoana kristiana sy silamo. Ireo Miozolmàna sy Kristiàna no manome ny 50 isanjato sy 48 isanjato amin'ireo mponina ao Nizerià.
Ny fomba nentina nanao io fakankevitra vao haingana io dia mampiseho fa ilay fanadihadiana dia natao tany anatin'ireo “toerana manana governemantam-paritra voatsinjaran'ny faritra jeôpôlitika ” ao Nizerià. Kanefa, Adamawa, Borno, ary Yobe milaza fa nahilika tsy ho tao anatin'ilay fanadihadiana ireo any amin'ny avaratra andrefan'i Nizerià, noho ny antony ara-pilaminana.
Misy faritra 774 manana governemantam-paritra ny ao Nizerià, rantsana eny ifotony amin'ny rafitry ny fitantanan'ny mpanatanteraka ao amin'ny firenena. Misy ihany koa faritra jeôpôlitika enina: Afovoany avaratra, Avaratra andrefana, Atsimo, Atsimo Atsinanana ary ny Atsimo andrefana.
Ny fomba fijerin'i Nwanze milaza fa tsy mitombina ny hoe ireo Kristiànina ao atsimon'i Nizerià no tsy maintsy nanome io votoaty manandanja amin'ireo vokatry ny fikarohan'ny Pew io. Nasehon'ilay fanadihadiana ihany koa fa “ambony kokoa ny fitiavan'ireo Kristiàna Nizeriàna an'i Etazonia (69 isanjato) raha oharina amin'ny an'ireo Silamo (54 isanjato).”
Taorian'ny namonoan'i Etazonia ilay Jeneraly mamimbahoaka Iraniàna, Qasem Soleimani, namoaka fampitandremana ho an'ny fireneny ny lehiben'ny polisy nizeriàna mba hisorohana izay rehetra mety ho fanakorontanana, ho an'ny “tombontsoam-pirenena.”
Nofaritan'ny hetsiky ny silamo ao Nizerià ho toy ny “fihantsiana ady amin'i Iràna ilay fanafihana an'habakabaka nataon'i Etazonia ka nahafaty an'i Soleimani “.
Nofariparitana ho “ny iray amin'ireo mpitondra erantany toherina be indrindra amin'izao vaninandro maoderina izao ” i Trump.
Na izany aza, mazava be fa maro ao Nizerià no mitsaoka (miankohoka) aminy.
Afrika Mainty4 andro izay